बीमा समितिले माग्यो उच्चदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारी, कसले भर्न पाउने ? – Everest Dainik – News from Nepal
बीमा समितिले माग्यो उच्चदेखि अधिकृतस्तरका कर्मचारी, कसले भर्न पाउने ?
काठमाडौं, कार्तिक ९ ।
बीमा समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एकजना निर्देशक माग गरेको छ ।
बीमा समितिको सांगठनिक संरचना अनुसार चारजना निर्देशक रहने व्यवस्था छ। तर हाल निर्देशक पदमा एकजना मात्रै रहेका छन् । निर्देशक पदका लागि आवश्यक योग्यता बीमा समितिको कर्मचारी विनियमावली अनुसार पूरा हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक पदमा पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ। समितिले प्रशासन तर्फकालागि उपनिर्देशक र सहायक निर्देशक माग गरेको हो।
कानुततर्फको उप निर्देशक पदमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने भएको छ । यसका लागि कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भने नेपाल सरकार अन्तर्गतका कुनै पनि संस्थान तथा निजामति सेवामा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने समितिले जनाएको छ।
समितिले दुर्इजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट माग गरेको छ । यसका लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूरा गरी नेपाल सरकार अन्तर्गतका कुनै पनि संस्थान तथा निजामति सेवामा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ।
अधिकृत तृतिय स्तरका लागि प्रशासनतर्फ ५ जना र कानुनतर्फ ३ जना सहायक निर्देशक माग गरिएको छ ।
प्रशासनतर्फको लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भने कानुन तर्फको लागि कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । प्रशासन तर्फ दुर्इ जना सहायक प्रथम माग गरिएको छ। यसमा लागि स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
आवेदनको लागि मंसिर ८ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरेर मंसिर १५ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ।